दाङका पूर्व प्रदेश सांसदले अवैध बाटोबाट सात सयलाई अमेरिका पुर्‍याएको सहयोगीको दाबी Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
राजनीतिको आडमा मानव तस्करी
दाङका पूर्व प्रदेश सांसदले अवैध बाटोबाट सात सयलाई अमेरिका पुर्‍याएको सहयोगीको दाबी
काठमाडौँ : २०७५ माघ २४ मा घोराहीको लमही सडक खण्डमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ का प्रदेश सांसद उत्तरकुमार वली चढेको गाडी यात्रुवाहक बससँग ठोक्कियो। दुर्घटनामा उनी गम्भीर घाइते भए।
पहिला दाङमै उपचारको प्रयास गरे पनि गम्भीर भएकाले काठमाडौं ल्याउँदा राम्रो हुने भन्दै उनलाई माघ २६ मा हेलिकप्टरमार्फत काठमाडाैं ल्याई मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरियाे। कोमामा काठमाडौं ल्याइएका वलीकाे होस खुल्न सकेन। फागुन १० मा उनको निधन भयो।
अमेरिका पुगेर पैसा कमाउने लोभमा मानव तस्करको पन्जामा परेर उम्किएका दाङ तुलसीपुरका नरेन्द्र बस्नेत १७ महिना अमेरिकाको जेलमा बसेर २०७५ पुस २४ मा नेपाल फर्किएका थिए। अमेरिका पुग्न २०७३ चैतमा बस चढेर भारत पुगेका उनले यसबीचमा १२ देशको चक्कर लगाएर नेपाल डिपोर्ट भएका थिए। नेपाल फर्कदा उनको परिवारले ७५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ गुमाइसकेका थिए।
उनी नेपाल आएर आफूलाई अमेरिका पठाउँछु भनेर मानव तस्करको पन्जामा पारेको भन्दै मानव वेखविखन अनुसन्धान ब्युरोमा जाहेरी दिए। जाहेरीमा उनले उल्लेख गरेका व्यक्ति थिए टोपबहादुर जिसी अनि मुकुन्दराज जिसी।
प्रहरीले टोपबहादुरलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा मानव तस्करीमा तेस्रो व्यक्तिको नाम जोडियो, ती थिए उनै उत्तरकुमार वली। तर उनको नाम जोडिदा उनको मृत्यु भइसकेको थियो।
नेपालगन्ज महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट एमालेको विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका वली २०५६ मा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस प्रारम्भिक कमिटीको सदस्य भए। स्ववियु निर्वाचनमा उपसभापति पदको उम्मेदवार बनेर पराजित भए।
२०६६ मा विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टीको राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य भए। दाङको राजनीतिमा अगाडि बढ्दै गएका उनको शङ्कर पोखरेलसँग निकटता बढ्दै गयो। उनी तत्कालीन दाङ ५ नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रीय इन्चार्ज भए।
केन्द्र र प्रदेश निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र पछि पार्टी एक बनाउने भनेर एक भए। दाङ २ क बाट शङ्कर पोखरेल प्रदेशको उम्मेदवार हुँदा उनी दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) उम्मेदवार बने र जिते पनि। पोखरेल मुख्यमन्त्री भए पनि उनले सरकारमा स्थान भने पाएनन्।
एकाएक ३४ वर्षको उमेरमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भयो।
उत्तर प्रदेश सांसद हुँदा जोडिन आइपुगे टोपबहादुर जिसी। सामान्य आर्थिक अवस्थाका जिसी पनि एमाले राजनीतिमा संलग्न थिए। उनी स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्यमा उठेर पराजित भएका थिए। गणतन्त्र दैनिकमा कामसमेत गर्थे। विस्तारै यी दुवै निकट भए।
उत्तरको देखिने काम राजनीति थियाे। प्रदेशमा भिजन भएका युवा नेताको छवि बनाउँदै आएका उनको अर्को पेसा थियो- ट्राभल्स। 'वली ट्राभल्स'का प्रोप्राइटर थिए उनी।
ट्राभल्स पनि देखिने मात्र। पछि खुल्दै आयो उत्तरकुमार राजनीतिको आडमा मानव तस्करीमा संलग्न थिए। अनि उनलाई सघाइरहेका थिए टोपबहादुर अनि उनकै कर्मचारी मुकुन्दराज जिसी।
वली ट्राभल्सको आडमा उत्तर र उनका सहयोगीहरू अमेरिका जान जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार हुनेहरूको खोजी गर्थ्यो। अनि अवैध रूपमा स्थल मार्गबाट अमेरिका पूर्याउने भन्दै पैसा असुल्थे। कोही अमेरिका पुग्थे पनि। कोही भने भएका सम्पत्ति सकेर यातनाले विछिप्त भएको मनस्थिति बोकेर देश फर्कन्थे।
कुख्यात मानव तस्कर जिसीलाई एसपी गणेश चन्दले अदालत नबुझाई हाजिर जमानीमा छाडे ,८ जनालाई समुन्द्रमा पूर्याए र ती डुबे
दुई वर्ष कैद सजायमा माघमा पक्राउ परेका कुख्यात मानव तस्कर टोपबहादुर भदौँमा कसरी पुगे युक्रेन ?
उत्तरकुमारको समूहले दाङका धेरै युवाहरूलाई अवैध बाटोबाट अमेरिका पठाउने सपना देखाएर पैसा असुले पनि उनीहरूको धन्दाको पोल खुलेको थिएन। बस्नेतले जाहेरी दिएपछि भने टोपबहादुरको पोल त खुल्यो नै राजनीतिक आवरणमा उत्तरकुमारले चलाएको मानव तस्करीको धन्दा पनि बाहिरियो।
वलीको समूहमा रहेर अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर मानव बेचबिखनमा संलग्न जिसीको बयानअनुसार बस्नेत फर्कनु अगाडि नै वलीले सात सय हाराहारीमा युवाहरूलाई अमेरिका पठाइसकेका थिए। यसरी वलीलाई पैसा बुझाएर अमेरिका पुग्नेमा जिसीको सालो दीपक केसी पनि रहेछन्।
जिसीका अनुसार उत्तरकुमारले अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा उठाएका युवाहरूसँग उनले पासपोर्ट सङ्कलन गरेर दुबईमा रहेका मनोज रबी नाम गरेका एजेन्टलाई पठाउने गर्थे। उनले बस्नेतले बुझाएका सबै रकम वलीले लिएको र त्यसमा आफू संलग्न नरहेको दाबी गरे पनि उनको ट्राभल हिस्ट्रीले भने त्यसो देखाउँदैनथ्यो।
उनी सिंगापुर, इन्डोनेसिया, भियतनाम, दुबई पटक-पटक गएको खुल्यो। उनी गणतन्त्र दैनिकको प्रेसमा काम गर्थे। उनले यी देशमा प्रेस र टिपरको सामान लिन गएको अपत्यारिलो दाबी गरे। पक्राउ परेको बेला उनको साथमा पासपोर्ट थिएन। उनले पोर्चुगलको भिसा लगाउन भारतीय नागरिकलाई पासपोर्ट दिएको दाबी गरे।
अवैध बाटोबाट अमेरिका पठाउन विभिन्न देशका एजेन्टलाई पठाउने पैसा भारत पठाएर हुन्डीमार्फत उत्तरले नै पठाउने दाबी गरेका उनले आफू निर्दोष भएको दाबी गरे पनि अनुसन्धानमा उनी निर्दोष देखिएनन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७७ पुस १९ मा यो मुद्दामा फैसलामा 'प्रतिवादीहरुमध्ये टोपबहादुर घर्ती क्षेत्री र उत्तरकुमार ओलीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कसुर जन्य कार्य गरेको देखिएको तर वलीको मृत्यु भइसकेको र अपराधीसँगै अपराध पनि समाप्त हुने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त रहेको' भन्दै उनलाई कुनै कसुर तोकेन।
टोपबहादुरको हकमा २ वर्ष कैद तोकियो। मुकुन्दराज जिसी पनि सहयोगी ठहर भए। उनलाई अदालतले एक वर्ष कैद तोक्यो। बस्नेतले ७५ लाख ९७ हजार क्षतिपूर्तिको दाबी गरेका थिए। अदालतले भने उत्तरकुमार वलीको हकदार विमलाकुमारी वलीबाट २५ लाख अनि टोपबहादुरबाट १२ लाख भराउने फैसला गरेको थियो।
उत्तरकुमार जीवित भएसम्म विमलाको राजनीतिसँग कुनै साइनो थिएन। उनको मृत्युपछि भने उनी राजनीतिमा आइन्। तत्कालीन नेकपाले उनलाई उनकै श्रीमानको मृत्युपछि रिक्त भएको प्रदेशको टिकट दियो।
विमलाले ५ हजार १०४ मतान्तरले काँग्रेसका उम्मेदवार केशवराज आचार्यलाई पराजित गरेर प्रदेश सांसद भइन्।
अहिले वली र जिसी दुवै जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न गएका छन्। २०७८ असार ९ गते वलीले गरेको पुनरावेदनमा उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतले २५ लाख तिर्नुपर्छ भनेकोमा सो रकम तिर्न नसक्ने भएको हुँदा बदर गराई पाउँ' भनेकी छिन्। त्यसको तारिख असोज १० गते तोकिएको छ।
उत्तरकुमार र टोपबहादुरको जालोबाट बस्नेत कसरी पुगे अमेरिका अनि किन गरियो डिपोर्ट अर्को श्रृखंलामा।
२०७८ भदौ ३१ गते १७:५९ मा प्रकाशित